सर्वोच्चको फैसला आउनै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक किन बोलाए सुरक्षा परिषद बैठक ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
२हस्ताक्षर समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै
३हस्ताक्षर समारोहलाई महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्दै
४नेकपा र सरकारबीच हस्ताक्षर समारोह शुरु
५राष्ट्रियसभाबाट सार्वजनिक हुनुअघि विप्लव प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार जाने
७अमेरिकाको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई
८ओलीसँग एकै मञ्चमा देखिनुअघि नवलपुरमा यसरी झुल्किए विप्लव
११तीन सातापछि सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
१२काठमाडौँ आइपुग्दै विप्लव, बाँस्तोलालगायतका नेताहरु रिहा हुँदै, सुदर्शनलाई छाड्न पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
सर्वोच्चको फैसला आउनै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक किन बोलाए सुरक्षा परिषद बैठक ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । दुई महिनाको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकिएको छ । फागुन ७ गते सबै बहस सकिएपछि इजलासले दुबै पक्षका वकिललाई फागुन १० गतेसम्म बहसको नोट बुझाउन दिएको समयावधि पनि सकिएपछि सर्वोच्चले आज मुद्दाको पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा तोकेको हो ।
इजलासको आदेशअनुसार सोमबार अधिवक्ताहरूले बहस नोट बुझाएका छन् । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधसभा विघटन गरेपछि ६ गते नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दामा बहस सकिएसँगै जुनसुकै समय फैसला आउन सक्ने बताएका थिए । ‘हेर्दाहेर्दै’ सकिएको अवस्थामा फागुन ११ गते अर्थात आज मंगलबार नै पनि फैसला आउन सक्ने बताइएको छ । तर यहि बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका छन् । बैठक आज बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित परिषदको कार्यालयमा बस्ने छ ।
परिषदका सदस्य सचिव एवम् रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले यो बैठकलाई नियमित भनेका छन् । उनले आजको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने खास एजेण्डा नभएको बताएका छन् ।
यद्यपि कतिपयले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै बैठक बोलाइएको अनुमान गरेका छन् । खासगरी राष्ट्रिय विपद र सुरक्षामा खतरा पैदा भए सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने गर्दछ । देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने गर्दछ । आज बैठक बोलाउनुको उद्देश्य भने खुलेको छैन । यसअघि गत कात्तिकमा सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् ।